FREE TIMES: November 2013
ကျမတို့ ရုံးနှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေး အတွက် နိုင်ငံ အသီးသီးက တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲမှာ တယောက် ကျမတွေ့တော့ တော်တော် အံ့အား သင့်သွားတယ်။ ဒီနှစ်စမှာဘဲ ဆေးစစ် တဲ့အခါ ကင်ဆာလို့ အဖြေထွက်ပြီး ကျမတို့ တတွေ စိတ် မကောင်း ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။
ကျမ ရဲ့ အချစ်ဆုံး ကြီးကြီးလဲ ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားသလို အမလို ခင်မင်ပြီး ချစ်ရတဲ့ ရှေ့နေမမ တစ်ယောက်လဲ ကင်ဆာနဲ့ ဘ၀ဆုံးသွား ရရှာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမတို့ မိသားစုနဲ့ နှစ်အိမ်တစ်အိမ် လိုဖြစ်နေတဲ့ မိုးကောင်းက အန်တီနဲ့အန်ကယ်လဲ ကင်ဆာနဲ့ဘဲ ဆုံးပါး သွားကြတယ်။အရင်ကတော့ ပန်းခါး ဆိုတာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးတယ်။ ပန်းပင် အခြောက်လေး တွေကို ရေနွေးကြမ်း လိုလုပ်သောက် ရတာပါ၊ အရမ်းကို ခါးတော့ ကျမတောင် စမ်းသောက်ကြည့်ပီး တွန့်သွားတာနဲ့ မသောက် ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခီမို သွင်းထားတဲ့ လူနာတွေဆို ခံတွင်းထဲ
ဘာထည့်ထည့် အရသာ မရှိတော့ဘူး။ အရမ်းလဲ သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
နတ်သမီး ဥယျာဉ်မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်..။
ချခင်းသူ Free Time Admin at 7:22 PM No comments :
ချခင်းသူ Free Time Admin at 7:18 PM No comments :
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပင်လယ်ကွေ့က ထူးဆန်းတဲ့ ကြောက်စရာသတ္တ၀ါ
ငါးပါးစပ် ထဲဝင်ပြီး လျှာမှာ ကပ်တွယ် နေပြီးနောက်မှာ လျှာကို စားပစ်လိုက်ပြီး ငါးရဲ့လျှာ နေရာမှာ သူတို့က အစားထိုး ၀င်နေတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပင်လယ်ကွေ့က Cymothoa exigua တွေ
နောက်တစ်ခန်း ကတော့ တိုင်တန်းနစ် သဘောင်္ နစ်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ တူပါတယ်။ isopod အမဟာ သူမရဲ့ မျိုးပွားတဲ့ ကိစ္စ ပြီးဆုံးချိန်မှာ ငါး ကို လွတ်ပြီး ထွက်ပြေး သလား၊ မျိုချလိုက် သလား ဆိုတာ မသေချာ သေးပေမဲ့ သူမက ငါးကို ထားခဲ့ပြီး ထွက်သွား ပါတယ်လို့ Brusca က ဆို ပါတယ်။ ကဲခင်ဗျားတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်။ လျှာ မရှိတဲ့ ငါးဘယ်လို အသက်ရှင် မလဲဗျာ။ ဒါက ကပ်ပါး လောကမှာ တကယ် ဖြစ်ပျက်တာပါ။ ငါး က isopod တွေကောင်းကျိုး အတွက် ဓားစားခံ ဖြစ်သွား တာပါ။ C.exigua ကဘာလို့ နှင်းဆီရောင် rose snapper တွေကိုပဲ ဒီလို လုပ် သလဲ ဆိုတာတော့ အခုထိ မသိသေးပါဘူး။ တခြားငါး တွေကိုတော့ အဲ့လို မလုပ်ဘဲ သူတို့ မျိုးပွားတဲ့ အလုပ်ကို ပြီးမြောက် စေပါတယ်။ ဒါက rose snapper ရဲ့လျှာက သူများထက် ပိုခံနိုင်ရည် နည်းနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Brusca ကပဲ ပြောပါတယ်။ တခြား ငါးတွေလို သွေးကြော ကောင်းကောင်း မရှိတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ဒီမှာ
သင်ယူ လေ့လာစရာ တွေကတော့ isopod အမတွေဟာ အစာ တင်မက သူမ ကလေးတွေ ကြီးထွားဖို့ အကာအရံလည်း လိုပါတယ်။ တခြား မျိုးစိတ် တွေလိုပဲ သူမကလည်း သူမ မျိုးဆက်ကို ချန်ခဲ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ mission accomplished ဖြစ်သွား ချိန်မှာ ဒီသဘောင်္ကို နှစ်မြှပ် လိုက်တာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီသနားစရာ ကောင်းတဲ့ snapper လေးကိုပါ။ တခြား ကပ်ပါးကောင် တွေရဲ့ သားကောင် တွေလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပါးစပ် ဟောင်းလောင်းနဲ့ သက်တမ်း မစေ့ဘဲ သေရ တာလေး ကတော့ ဆိုးပါတယ်။
ချခင်းသူ Free Time Admin at 7:15 PM No comments :
ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ တချိန်လုံး စားချင်တာတွေ စားကြ သောက်ချင်တာတွေ သောက်ကြနဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ ဘယ်လို အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ သတိမထား မိကြပါဘူး။
စားသောက်သမျှ တွေဟာ အသည်းတို့ ကျောက်ကပ်တို့မှာ စစ်ထုတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ဟာ အဆိပ်အတောက် တွေကို ခံစားရပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ မျက်နှာတို့ ခန္ဓာကိုယ်တို့ကို သန့်ရှင်းရုံတင် မကပဲ ကိုယ်တွင်းက ကလီဆာ တွေကိုပါ သန့်ရှင်း ပေးသင့် ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ အသည်းကို သန့်ရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းတွေကို ရေးပြပါမယ်။
ဒီနည်းတွေဟာ ပိုက်ဆံလဲ အကုန်သက်သာပြီး အိမ်မှာတင် ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်တာမို့ ဈေးကြီးပေးပြီး Detox တွေ ၀ယ်သောက်ရတာထက် အများကြီး သက်သာပါတယ်။
1. Apple Cinnamon Detox Water - သောက်ရေထဲကို ပန်းသီးစိတ် ကလေးတွေနဲ့ သစ်ဂျပိုးမှုန့် အနည်းငယ်ကို စိမ်ပြီးသောက်ခြင်း
2. Cucumber Lemon Mint Detox Water - သောက်ရေထဲကို သခွားသီးစိတ် ကလေးတွေရယ်၊ သံပယိုသီး ခေါ် Lemon ပါးပါးလှီး ထားတာရယ်၊ ပူစီနံရွက်ရယ် စိမ်၍ သောက်ခြင်း
3. Strawberry Detox Water - သောက်ရေထဲကို စတော်ဘယ်ရီသီး လေးများ စိမ်၍ သောက်ခြင်း
4. Simple Detox Water - ဒါကတော့ သောက်ရေထဲကို Lemon တစ်စိပ်လောက် ညှစ်ထဲ့၍ သောက်ခြင်း
5. Apple Cider Vinegar Detox Water - သောက်ရေထဲကို ACV အနည်းငယ်ထဲ့၍ သောက်ခြင်း
6. Weight Loss Detox Water - Grapefruit ကိုသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲကို မန်ကျည်းသီးမှဲ့ နဲနဲရယ် သခွားသီး နည်းနည်းရယ် ထဲ့ပြီး သောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံး လုပ်ရမယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား နိုင်ငံတွေက တချို့လူတွေဟာ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက် (သို့) သုံးရက် ၊တစ်လကို တစ်ပတ် အဲ့လို ကိုယ်အဆင်ပြေသလို Detox လုပ်ကြ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ရက်လုံး ဆိုတာက အဲ့ဒီတစ်ရက်မှာ တခြားဘာ အစားအစာမှ မစားပဲ အသီးအနှံတွေနဲ့ အသီးအနှံ ဖျော်ရည်တွေပဲ သောက်ပြီး Detox လုပ်တာပါ။ တစ်နေ့လုံး တခြားအစာဘာမှ မစားရပါဘူး။
ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကို အနားပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ သန့်ရှင်းရေးပေါ့ တစ်ရက်လုံး မလုပ်နိုင်လဲ Simple Detox Water ကတော့ ဘယ်သူမဆို သောက်ဖို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အချိုရည်တွေ သောက်မဲ့အစား Detox Water လေးသောက်တော့ ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းတာပေါ့။
ချခင်းသူ Free Time Admin at 6:52 PM No comments :
နတ်သား၊ ထိုအရှင်မြတ်တို့ဟာ မရောက်လာသေးတဲ့ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘကိုလည်း ("ဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲ၊ ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေ ဘယ်သူတွေကဖြင့်လာလှူကြမလဲဆိုပြီး") မတောင့်တကုန်။ သုံးဆောင်ပြီးသော ပစ္စည်းလာဘ်လာဘတို့၌လည်း (ဘယ်တုန်းကဖြင့် ဘယ်လိုစားသောက်ဖွယ်ကောင်းကောင်းတွေသုံးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုအကောင်းစားသင်္ကန်း၊ ဆေးဝါးစသည် လှူလို့ သုံးဆောင်ခဲ့ရတယ်စသည်ဖြင့်တွေးပြီး) မစိုးရိမ်ကြကုန်။ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဆဲ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘဖြင့် မျှတကုန်၏။ ထို့ကြောင့် အသားအရေကြည်လင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဟု မိန့်တော်မူပါတယ်။
တကယ်တော့ သူမိုက်တွေ အသားအရေခြောက်ကပ်တယ်ဆိုတာ မရောက်လာသေးတဲ့ လာဘ်လာဘတွေကို တောင့်တကြတယ်။ ပြီးပြီးသော လာဘ်လာဘတွေကို ပြန်တမ်းတရင်း စိုးရိမ်ကြရတယ်။ ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် သူတို့ဟာ စိမ်းစိုနေတဲ့ကျူပင်ကို ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ခြောက်ကပ်နေသလို အသားအရေခြာက်ကပ်နေတာပါဟု ဟောတော်မူလိုက်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ လူတွေ ခန္ဓာကိုယ် အိုလွယ်တယ်။ ခြောက်ကပ်လွယ်တယ်ဆိုတာ အတွင်းကိလေသာတွေအားကြီးလို့ပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟအားကြီးကြတော့ အသားအရေကပါ မစိုပြေဖြစ်ရတယ်။ ကိလေသာနည်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေမှာတော့ ဆေးဝါးမသုံးပဲလျှက် အသားအရေကြည်လင်နေပါတယ်။
ချခင်းသူ Free Time Admin at 6:41 PM No comments :